सर्प - समय-समाचार
मुक्तिनाथ घिमिरे शनिबार, २०७८ भदौ ५ गते, ०२:०९ मा प्रकाशित
“आँधो साप बोलाइदिन्छु अनि थाहा पाउँछौ ।” केटाकेटीले अनावश्यक अर्गेल्याईं गर्न थालेपछि आमाहरूले रोड्याईंबाट मुक्ति पाउन जुक्ति फुराए । केटाकेटी डराए र पिरोल्न छाडे । आमाहरूलाई आफ्ना काम निप्ट्याउन सहज भयो ।
“ढोडियालाई खबर गर्दिन्छु, सधैँ सिँगौरी र खुट्टी लगाएर कसरी सक्नु, जेमराजहरू ।” लैना गाईभैसीले हरियो घाँस, चोकर र खोले नियमित पाएर पनि ढुङ्ग्रो र बाल्टिन भर्न छोडेपछि घरमूली बाहरू बिच्किए । भोलिदेखि नै लैना वस्तु पग्रिए । दूध छेलोखेलो भयो । बाहरूको चिन्ता हट्यो ।
“धामनलाई ल्याएर राख्छु अनि हेर्छु तिमेर्को चुरिफुरी ।” किराहरूले बालीनाली सखाप पार्न थालेपछि किसानहरू पड्किए । धामन आउने सूचना मात्रले पनि किराहरूले खेतबारी छाडे । किसानहरूले फसल काटे र भित्र््याए ।
“गङ्ग्वालीलाई धपाइदिन्छु अब । सधैँ हेप्छस् । तेरो घरको ‘सह’ गएपछि तँ पनि मजस्तै त हुने होस् ।” कामदारले मालिकलाई आक्रोश पोख्नु मात्र के थियो मालिक लत्रियो र मित्रवत् व्यवहार गर्न थाल्यो । सम्भावित भिडन्त टरेर गयो ।
“हरेउ भेला पारेर छोडिदिन्छु अनि । तिमर्ले अति गर्यौ । रुखको हाँगामा बसेर पनि कसैले दिसा गर्छ ? मात्तिएका मोराहरू । बेला कुबेला झाडीमा किन छिरेका ?” हेडसरले छुल्याहालाई तर्साए । विद्यार्थीहरू कापे र अनुशासित बने ।
“करेतलाई कल गरौँ ? पाँचतले घरमा बस्दैमा आफूलाई राजा ठान्छस्, शोषक ? तेरो दमन हेरौँला हामी पनि ।” राताफेटे युवाहरूले आगो ओकलेपछि साहूको सातो गयो । साहूका रवाफ सोत्तर भए । बन्धनबाट धेरैले उन्मुक्ति पाए ।
“गोमनले ठुँगाउन सकिनँ भनेँ त के र ! कति सहनु थिचोमिचो पनि । तेरो घोक्रो गोमनको सामुन्ने परेपछि हेरौँला ।” सामन्तीलाई ‘सबाल्टर्न’ले हायलकायल बनाए । ऊ दच्कियो र निहुरमुन्टी भयो ।
“सिरिसे साप हुलिदिन्छु घरमा अनि खान्छस् केरा ।” कचकचे छिमेकीलाई यत्तिभन्दा बढी भन्नै परेन । पूरै टोल शान्त बन्यो ।
धेरैपछि अचानक फेरि केटाकेटी गनगन गर्न थाले, लैनो वस्तु डुक्रियो, सलह सलबलाए, मालिक बौलायो, विद्यार्थी उत्ताउलिए, साहू सन्कियो, सामन्तीले हेप्न थाल्यो, छिमेकी अशान्त भयो जब पारासिटामोल, बोरा र बिन बोकेका सपेराहरू गाउँसहरमा छ्यापछ्याप्ती हुन थाले ।